४ वटी छोरी जन्मेपछि कुवेतमा लुकेका ज्वाई खोज्न जब दिदी सासुले अर्कै युवती बनेर फेसवुकमा यस्तो कुरा गरिन् (भिडियो हेर्नुस्) – Namaste Host
४ वटी छोरी जन्मेपछि कुवेतमा लुकेका ज्वाई खोज्न जब दिदी सासुले अर्कै युवती बनेर फेसवुकमा यस्तो कुरा गरिन् (भिडियो हेर्नुस्)
April 12, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on ४ वटी छोरी जन्मेपछि कुवेतमा लुकेका ज्वाई खोज्न जब दिदी सासुले अर्कै युवती बनेर फेसवुकमा यस्तो कुरा गरिन् (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । छोराछोरी दुवै बराबरी, यो राष्ट्रिय अभियान हो । सुन्दा निकै सुन्दर लाग्ने यो स्लोगन सबै अभिभावकका लागि भने राम्रो नलाग्ने रहेछ । एक बुवा जसले चार छोरी जन्मिए भनेर उनीहरुलाई अलपत्र पारेर विदेशमै हराएका छन् । टेक सिंह गुरुगं हराए पछि उनको श्रीमती चार छोरीको पालन पोषण गर्न निकै संघर्ष गर्दैछन् । परिवारको खुसीको लागि भन्दै उनले टेकसिंहलाई ऋण खोजेर कुवेत पठाएकी थिइन् । श्रीमानले आफु विदेश जाँदा लागेको ऋण त तिरेनन् उल्टै आफै हराए ।
उनले नै जन्मदिएका चार छोरी बुवाको पर्खाइमा आँखा आछ्याएर बसेका छन् । उनको श्रीमती पनि टेक सिंहको पर्खाइमा छन् । चार छोरी र उनको श्रीमती विचल्लीमा परेपछि उनलाई माइतीले सहारा दिएका छन् । माइतीको पनि राम्रो आर्थिक अवस्था राम्रो छैन । ससुरा र अमाजुले ऋण खोजेर टेक सिंहलाई पठाएका थिए । तर ऋण नतिरेपछि साहु आएर उनको श्रीमतीले पालेका बाख्रा खसी सबै लगिदिए । दुख गरेर कमाएको पैसा पनि साहु आएर मागेर लैजान्छन् ।
चार छोराछोरीको पेट पाल्न र उनीहरुलाई पढाउन नसक्ने उनको अवस्था छ । ज्वाई हराएपछि बहिनीलाई निकै दुख भयो भनेर उनको दिदीले खोजि थालिन् । एजेन्ट मार्फत उनले ज्वाई खोजी गर्दा उनले अरु युवतीलाई नै पैसा पठाउने गरेको थाहा भयो । प्रत्यक महिना घरमा पैसा पठाउँछु भन्थे तर उनले अर्कै युवतीलाई पठाउने गरेको थाहा पाएको बताइन् । उनीहरुले ज्वाईको क र्तु त थाहा पाउन दिदी नै फेक आइडी बनाएर ज्वाईसंग कुरा गर्न थालिन् । उनले श्रीमतीको दिदीलाई अरु नै युवती भनेर कुरा गर्न थाले । त्यसपछि को युवती को रहेछ भनेर खोजी थाले उनीहरुले युवती पत्ता लगाएपछि केटीलाई नै गएर भेटेको दिदीले बताएकी छन् ।
ज्वाईले पठाएको पैसा मध्य ५० हजार रुपैया युवतीसंग फिर्ता मागेको दिदीको भनाई छ । उनले युवतीलाई मेरो विवाह भएको छैन । एक जना दिदी मात्र हुनुहुन्छ उहाँको पनि विवाह भइसक्यो भनेर युवतीलाई झुट बोलेको थाहा भएको छ । उनलाई किन यस्तो गर्नुहुन्छ ? भनेर साथीले सम्झाउँदा छोरी मात्र छन् अब म उनीहरुलाई मतलब गर्दिन घर पनि जान्न भनेको पनि उनको दिदीले बताइन् ।
जब काठमाडौको सडकमा एकै पटक यतिधेरै गाडी निस्किए !
July 22, 2021 Bijay Lama
श्रीमतीलाई म र्नेग रि कु टे र श्रीमान अर्कै लिएर फ रार भए, आमा छोरीको बिचल्ली (भिडियो सहित)
March 15, 2021 March 15, 2021 Bijay Lama
महान श्रीमती सरस्वती, जसले मृगौला फेल भएका ब्यक्ति संग विवाह गरी आफ्नै मृगौला दिइन(हेर्नुस् भिडियो)
April 5, 2021 Bijay Lama